converter များစုဝေးရာ(1) - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
22-03-2007, 08:17 PM
Video Converter Software တွေထဲမှာတော့ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။သူကသုံးရတာ အလွန်လွယ်ကူသလို ရိုးရိုး DVD player တွေမှာပါ ဖွင့်လို့ ရ တဲ့ DVD File Type ကိုတောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။သုံးစွဲကြည့်ကြပါ။အသေးစိတ်ကို အောက်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Last edited by Aung Aung; 18-08-2008 at 10:10 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 51 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုရဲလင်းထွန်း, ပင်းပင်းဝ, ဖိုးကံကောင်း, ဖယောင်း, ဗညား, မင်းခကို, မထက်, ရာမ, ရဲထက်သာ, ရဲထွတ်, ရဲရဲလေး, ရဲသွေးန်း, အီဖေကို, အသေးလေး(4tL), ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, တေဇာ, နေမင်းခ, နေမင်းမောင်, မောင်ကီး, မောင်သံသရာ, သောကြာသား, အောင်ဗလ, အေးဇော်ဆွေ, ငြိမ်းချမ်း, နှင်း, agzaya007, aungthuraATR84, Blackbrother, blackNwhite, boya, chitmoeapril, creative2020202020, gogogyi, hope4future, Jaincool, KOKYI, kyansitthar, mjkomg012@gmail.com, mr.jittwo, nwmgmg, Oliveway, Phoekwarlay, pieces, tinkokooo, Venom, waterpeople, yawnathan, yemin7, yethway
Last edited by tu tu; 07-03-2010 at 10:52 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရဲရဲလေး, မောင်သံသရာ, nwmgmg, Thein Than
23-03-2007, 11:20 PM
Aone Ultra iPod Movie Converter 1.7.2
This one works with 1.7.2 in also :
User Name: EiTheL TEAM
Registration Code: 2FC79030
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ဖယောင်း, ရဲရဲလေး, အီဖေကို, မောင်သံသရာ, နှင်း, aungthuraATR84, blackNwhite, kktth, ko lin, kyansitthar, nwmgmg, Phoekwarlay
24-03-2007, 03:54 AM
Wondershare Video To iPod Converter v2.0.2
Wondershare Video to iPod Converter isaprofessional video converter for Apple iPod video. Comes with powerful encode /
decode ability, you can easily and quickly convert all popular video formats like AVI, MPEG, WMV, MOV, RM, ASF, MP4 to iPod
video. Additionally, regardless you areacomputer rookie or an expert, its easy-to-use interface and rich options for you to
enjoy the job done within minutes.
24-03-2007, 04:18 AM
Re: MP3 & Audio Software
ဒီဆော.၀ဲလေးတွေကတော. audio နဲ.ဆိုင်တဲ.ဆော.၀ဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်.......
DisCat can organize all your data from removable disks. It catalogs CD's and DVD's into one central directory
Last edited by Aung Aung; 19-08-2008 at 01:37 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုရဲလင်းထွန်း, KOKYI, nwmgmg
24-03-2007, 04:19 AM
Bingo! DVD Ripper 3.4.60310
Bingo! DVD Ripper isaDVD converter which can rips DVD to VCD, DVD to DivX..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Bingo! DVD Audio Ripper(DVD to MP3 Wave) 3.4.60310
extract DVD audio and rip DVD movie soundtrack to mp3 and convert DVD to wav
24-03-2007, 04:20 AM
Bingo! RM to MP3 Wave Converter 3.4.60310
convert Real Audio files to MP3 WAV files,Extract the Audio from the Real Video
24-03-2007, 04:21 AM
Free CD to MP3 Converter 2.0
Bingo! RM MP3 to Audio CD Maker 3.4.60310
Directly burn your Real Audio Video RM RA RMVB..., MP3, and WAVE files to audio CD without temporary.Bingo RM MP3 to Audio CD Maker converts Real Audio (RM RA RMVB...), MP3, WAVE files to CD Audio format for normal CD player access. You can directly burn your Real Audio (RM RA RMVB...), MP3, and WAVE files to audio CD without any temporary files.Features: 1.Support Input Real Audio (RM RA RMVB...) files 2.Support Input Real Vi
24-03-2007, 04:22 AM
Complete solution for Multimedia Editing -Management includes: File Manager for Windows 9x/ME/NT/2000/XP, File Renamer, ID3 Tag manager. Audio Converter - Editor, Visual Audio Editor, CD Audio Grabber, CD-DVD Writer, Audio - Video Player, Audio Recorder, Playlist Manager Picture Viewer, Zip Archiver, Media Library and more. Supported formats: MP3, MP2, WMA, OGG Vorbis, WAV, Compressed WAV, GSM, RAW, VOX, G726, G723, G721, MIDI, MPEG, WMF, AU
Sprintbit Playlist Manager 2.6
24-03-2007, 04:23 AM
RM MP3 CD Burner 3.4.60125
Directly burn your Real Audio Video (RM RA RMVB...), MP3, and WAVE files to audio CD without temporary.Bingo RM MP3 to Audio CD Maker converts Real Audio (RM RA RMVB...), MP3, WAVE files to CD Audio format for normal CD player access. You can directly burn your Real Audio (RM RA RMVB...), MP3, and WAVE files to audio CD without any temporary files.Burn RM to CD, RM CD Burner, Real Audio CD Burner, RA CD Burner,rm cd burn;mp3 cd burn;audio
16-04-2007, 02:14 PM
converter ၀ပ်ဆိုဒ်လေးပါ.......converter ဆော့ဝဲတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဗျ....အားလုံးအသုံးတည့်မယ်ထင်ပါတယ်........
Last edited by လူဖုန်း; 16-04-2007 at 02:19 PM..
22-04-2007, 12:08 AM
Goldwave v5.20ilclude keygen
song ဖိုင်လေးများကိုspecial effect လေးများလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.......
တည်းဖြတ်ပြီးသောsong ဖိုင်လေးများကိုwav, wma, mp3, ogg, aiff, au, vox ဖိုင်လေးတွေအဖြစ်လဲသိမ်းနိုင်ပါတယ်....
22-04-2007, 01:09 AM
Convert AVI(Divx, Xvid, Mpeg4) to Mp3, Wma and Wave format.
အောက်မှာ ဒေါင်းလုဒ်လင့်လေးပါ။ အဆင်ပြေတာနဲ့ ယူနိုင်ပါတယ်။
Last edited by tu tu; 06-09-2010 at 04:03 PM..
မထက်, မွန်သန့်, ရဲထက်သာ
23-06-2007, 02:14 PM
ပို့စ် 438 ခုအတွက် 1,224 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
MP4 to MP3 Converte
MP4 to MP3 Converterကတော့ MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, AVI, 3GPP, 3G2, MOV, RM, RMVB, OGG, DV, H.264,MP4 filesတွေကနေ MP3 formatကိုပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေက တော့Zune, iPod shuffle, iPod nano, iriver PMP-100, Creative Zen Vision etc. တို့မှာသုံးလို့ရပါတယ်။
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်လေးမှ အားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ တစ်ခုခုဖိုရမ်မှာ အခက်အခဲရှိရင် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ myanmarfamilyhelpbyjit@googlemail.com
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖယောင်း, မွန်သန့်, မောင်သံသရာ, aungthuraATR84
Visit ဂျစ်တူး's homepage!
Find More Posts by ဂျစ်တူး
06-11-2007, 10:14 AM
A-Z Video Converter Profession ဆိုတဲ့ toolကတော့ ဗီဒီယို ဖိုင်ရဲ့ ဖော်မက် ပြောင်းတဲ့ဟာလေးပါ။ သင်ရဲ့ပြောင်းချင်တဲ့ ဖိုင်တွေကို အောက်ပါတွေအတိုင်း ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
AVI, DivX, XviD, MPEG, WMV, MOV, ASF, QuickTime, RM, RMVB into AVI, DivX, XviD, DVD, SVCD, VCD, MPEG-1, MPEG-2, WMV, ASF, RM or RMVB formats ။ ရိုးရိုးလေးပါ ပြောင်းချင်တဲ့ ဖိုင်ကိုရွေးပြီး Output Format ကိုရွေးလိုက်ရုံပါပဲ.....
ဒီစာရဲ့အောက်ပိုင်းက ကိုစောပြန်တင်ပေးထားတဲ့ပို့စ်ပါ။ ပို့စ်၂ခု အချိန်ကွာတော့ ရှာရခက်မှာစိုးလို့ ၂ ခု ပေါင်းလိုက်ပါတယ်။
A-Z Video Converter Professional v 7.25
Last edited by Aung Aung; 16-09-2008 at 04:34 AM.. Reason: merge
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုအောင်, စစ်တွေသားချေ, ပဲပြုတ်, ဖယောင်း, ရဲထက်သာ, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, aungthuraATR84, blackNwhite, bonge, nwmgmg
28-12-2007, 05:45 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Dec 2007
ပို့စ် 43 ခုအတွက် 69 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Download and convert YouTube Video to MP3 audio files
You tube movies မှ သီချင်းများ၊ သတင်းများနဲ့ ဇာတ်လမ်းများကို MP3 file များအဖြစ်ပြန် save နိုင်တဲ့ software တခုဖြစ်ပါတယ်။ free software တခုဖြစ်ပြီး You Tube မှ သီချင်းများ ကို MP3 အဖြစ်တခါတည်း save နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် You Tube မှ သီချင်းများနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သတင်း၊ ဇာတ်လမ်းတိုများကို VCD FLV file များနဲ့ save တဲ့ အခါတွေမှာ resolution မကောင်းဘဲ File size လည်း MP3ထက်များပါတယ်။ MP3ပုံစံနဲ့ save လိုသူများအတွက် အသုံးတည့်မဲ့ software တခုပါ။ Convert *.flv video files to *.mp3. လုပ်ပေးတာပါ။
ကျွန်တော်သုံးကြည့်သလောက် ခရမ်းပြာအိမ်မက်လို web မျိုးက U tube ထဲကသီချင်းတွေကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့မရပါဘူး။ URL dose not contain ဆိုပြီး imformation ပြပါတယ်။
you tube မှာ direct တင်ထားတဲ့ သတင်း၊ ဇာတ်လမ်း နဲ့ သီချင်းလိုမျိုးအတွက်ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဥပမာ_ http://video.google.com/videoplay?do...16807458&hl=en ဆိုတဲ့ link မ်ျိုးကို U tube URL အဖြစ် input လုပ်လို့မရပါဘူး။
Step 1. Download Free YouTube to MP3 Converter
Step 2. Launch Free YouTube to MP3 Converter
Step 3. Select input video file
Step 4. Select the Output Location
Step 5. Select the Output Format Profile
Step 6. Extract Audio
For downloading software !
Last edited by PyaitSone; 25-09-2008 at 11:42 PM.. Reason: Link အသစ်ပြင်ရန်။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ bushyhair အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရန်လေး, မောင်သံသရာ, သော်ဇင်, မြင့်မိုရ်, kwarsi, nwmgmg
Find More Posts by bushyhair
10-01-2008, 11:30 PM
ပို့စ် 251 ခုအတွက် 825 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Power Audio.Converter.v1.6 လေးပါ။ AMR MP3 WAV WMA M4A AC3 Audio ဖိုင်တွေကနေ အခြားသော WAV, MP3, MP2, MP1, MPEG, MP4, M4A, AAC, OGG, AVI, MPC, MOV, QT, AIFF, AU, AC3, WMA or 3GP to WAV, MP3, MP2, OGG, AC3, VOX, WMA , AMR ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူုပြောင်းနိုင်ပါတယ်....
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ kothu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, nwmgmg, sismin, thetzin
Find More Posts by kothu
11-01-2008, 04:39 AM
ပို့စ် 1,015 ခုအတွက် 4,381 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ABest Video Converter Spirit is an excellent video converter which converts video files into almost all popular PC video , Mobile video and audio formats .
Convert your favourite video to AVI,WMV, MPEG, MOV, RM, RMVB, ipod, MP4, SWF, FLV, MP3 formats
မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား။
Last edited by Aung Aung; 28-09-2008 at 05:36 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Aung Aung ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Aung Aung
ပို့စ်6ခုအတွက်9ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် Install လုပ်ပြီး Run တော့ Registration Name , Registration Key တောင်းတယ်ဗျ .. ။။
Continue Unregistered နဲ့ ကျွန်တော်ဆက်သုံးတာ OK ပါတယ် .။။
But ကျွန်တော်သိချင်တာက Time Restriction များရှိလာလို့ဗျာ ..။။
Key လိုရင် အကို့ကို Key လေးပါတင်ပေးပါတောင်းမလို့ .. ။။
Key မလိုဘူးဒီလိုပဲဆက်သုံးလို့ရယ်ဆိုလဲ Ok ပေါ့ဗျာ .. ။။
Share ပေးတဲ့အကိုကို ကျေးဇူးပါဗျာ .. ။။
Find More Posts by ညီသော်
11-01-2008, 12:44 PM
ဘာမှ မလိုပါဘူး ကိုညီသော် ရေ...
ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ သုံးနေတာ ခင်ဗျ။
ကီးတွေဘာတွေ လိုလည်း ပြောလိုက်ပါ ကျွန်တော်ရှာပေးလိုက်ပါမယ်....
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kothu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
17-01-2008, 01:51 PM
ပြန်စာ - Download and convert YouTube Video to MP3 audio files
Mediafire ကမဟုတ်ပဲ .. တခြား Site လေးကပြန်တင်ပေးလို့ရမလားဗျာ ..။။
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဗျာ .. ။။
17-01-2008, 05:05 PM
Originally Posted by ညီသော်
တခြား Site လေးကပြန်တင်ပေးလို့ရမလားဗျာ ..။။
လင့်ခ်သေသွားလို့ထင်တယ်။ ဒီမှာ free down နိုင်ပါတယ်။
ပို့စ် 26 ခုအတွက် 43 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
No.1 Video Converter 4.1.46
VCD cutter လို ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါ....ဗီဒီယို ဖိုင်တွေကို format ပြောင်းတဲ့ဟာလေးပါ....
ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းကင်းသော ဥပက္ခာတရားသာလျှင် ပြီးပြည့်စုံသောစိတ်ချမ်းသာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ :83:
Find More Posts by shwepoekg
26-02-2008, 08:04 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Feb 2008
ပို့စ် 218 ခုအတွက် 554 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Internet Video Converter 1.52.14
အင်တာနက်ကနေ အလွယ်တကူ download လုပ်လို့လည်ရပါတယ် ။file format ကိုလည်းပြောင်းလို့ ရပါတယ် ။ အားလုံး အလွယ်တကူပါပဲ ။တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ် ။ download ရော file convertion အတွက်ရောပေါ့ ။
* Improved integrated player
* Capture/extract screenshots from videos
* Video soundtrack exported to MP3 and WAV
* Improved compatibility for flash FLV files
* Extract sample video with shorter duration from original video
* Add title to converted video for PSP, IPOD etc.
* Choose encoding engine between FFmpeg and Mencoder (by default) for video FLV encoding
* Adding profiles for DivX format (Handheld, Portable, Home Theater)
* Compatibility improvement for iPod and PSP
* Warning message for successfully or failed done job and for uncompatible files
* Optimized processor (CPU) resources
* Donate money directly for supporting this software development by PAYPAL simple and secure plateform
* IVC 1.40 without installation version (.zip) (portable version) is windows VISTA compatible !
* Convert videos between major formats (Mpeg (vcd/svcd/dvd compliant), DV, Quicktime, Windows Media, Xvid, H264, 3GP, PSP, iPod, Flash video (FLV, Swf) got from Youtube, DailyMotion, Google Video etc.)
* A video player is integrated for playing all videos.
* Rotate videos taken from digital camera
* Download videos from over 50 websites like Youtube, DailyMotion, Google Video etc.
* Extract soundtrack from video.
Internet Video Converter 1.52 is more stable, more compatible, always as simple and efficient! And itÂ´s always free for private and professional usage.
ှSOMETHING IS BETTER THAN NOTHING
Last edited by ဘိုးတော်; 29-02-2008 at 03:05 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဘိုးတော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဘိုးတော်
17-05-2008, 01:45 PM
ပို့စ် 115 ခုအတွက် 324 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်စုထားတဲ convector တွေတင်ပေးထားတာပါ မိတ်ဆွေတို့မှာ ရှိတဲ convector တွေကိုဒီမှာလာမျှဝေကြပါ
Last edited by မောင်တေဇာဝင်း; 30-05-2008 at 05:32 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မောင်တေဇာဝင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, creative2020202020, kyawswarl
Find More Posts by မောင်တေဇာဝင်း
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 08:29 AM